काेभिड बिरामीलाई खाना दबाइ दिने राेबाेटका यी आविष्कारक
कोभिड–१९ को विश्वव्याधि महामारी, फैलिँदो संक्रमण र मृत्युका खबरले बितेका सात महिना नेपाली जनजीवन नराम्ररी खल्बलियो । आर्थिक–सामाजिक सम्बन्धहरू तहसनहस भए । खबर नै नबनेका घरघरका संकट त कतिकति ! यो स्थिति कहिलेसम्म लम्बिने हो, अनुमान गर्न कठिन छ । आमनागरिकलाई महामारीबाट जोगाउन र अहिलेका संकट पार लगाउन सरकार करिब–करिब असफलजस्तै देखियो ।
यस्तोमा बादलमा चाँदीको घेरा बनेका केही त्यस्ता पात्रहरू हामीले खोजेका छौँ, जसले चरम निराशाका बीच पनि आशाको सञ्चार गरेका छन् । चौतर्फी नकारात्मक खबरका बीच सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेका छन् । यस वर्षको दसैँ विशेषमा हामी तिनै आशाका आधारशिला पस्किनेछौँ । – सम्पादक
कोरोना संक्रमण नेपालमा फैलनेबित्तिकै एउटै चिन्ता थियो- संक्रमणबाट बच्ने कसरी ? जसका लागि हजारौँको संख्यामा मानिसले जागिर छोडेर संक्रमणबाट बच्न घर बसे । अस्पतालमा पनि नर्स तथा केही डाक्टरहरू नै जागिर छोडेर बसे ।
जताततै त्राहिमाम वातावरण बनिरहँदा विराटनगरका युवाहरूको एउटा टोली भने संकटकालमा सहयोगी आविष्कार कसरी गर्न सकिन्छ भनेर लागिपरे । स्थानीयस्तरमा नै विदेशमा बन्ने नर्सिङ रोबोट बनाउन कस्सिएका ती युवाहरूले अन्ततः अस्पतालमा बिरामीलाई खाना खाजा पुर्‍याउने, औषधि दिने, अस्पताल परिसर स्यानिटाइज गर्ने राेबोट बनाए ।
रोबोटमा १२ भोल्टको ब्याट्री जडान गरिएको छ जसले एक पटक फुल चार्ज गर्दा कम्तीमा २५ मिनेटको समयसम्म निरन्तर काम गर्न सक्नेछ । त्यस्तै, मोबाइल एपबाट समेत रोबोट सञ्चालन गर्न सकिन्छ ।
जसका लागि रोबाेटमा व्हील चियरको पाङ्ग्रा, वाईफाईजडित क्यामेरा, मोटर वाइपर जडान गरिएको छ । साथै, करिब ५० मिटरको दूरीबाट यसैमार्फत फोटो खिच्न सकिन्छ भने ८ सय मिटरको दूरीसम्मबाट रोबाेट नियन्त्रण गर्न सकिनेछ ।
योसँगै बिरामीको सम्पूर्ण गतिविधि क्यामेराको मद्दतबाट खिचेर बिरामीहरूलाई सुसूचित गर्ने काम पनि गर्नेछ । जस्तो: स्यानिटाइज गर्दै गरेको अवस्थामा बिरामीलाई खबर दिने, संक्रमित आउँदै गरेको खण्डमा अन्य बिरामीलाई टाढै रहन खबर दिनेलगायतको काम गर्दै आएको छ ।
कारखाना नामक संस्थाका यी युवाहरू सबै वैज्ञानिक भने होइनन्, व्यवस्थापन, इन्जिनियरिङ तथा विज्ञान विषय लिएर क्याम्पस पढ्दै गरेका युवा हुन् । जसले चाइनामा बनेको रोबोट युट्युबमा हेरेर १२ लाख पर्ने राबोट नेपालमै बनाए ।
रोबोट बनाएर राष्ट्रियस्तरमा वाहवाही नपाए पनि स्थानीय स्तरमा चर्चा भने राम्रै बटुल्न सफल भएका छन् । कारण उनीहरूका नर्सिङ रोबाेटले अहिले विराटनगरको कोशी अस्पतालमा रहेका कोभिड संक्रमित बिरामीहरूको सेवा गरिरहेको छ ।
महेन्द्र मोरङ क्याम्पसबाट रसायनशास्त्रमा स्नातक तह पूरा गरेका रिसब आचार्यले समन निरौला, प्रकाश सुवेदी, दिपेश धिमाल, रेवस धिमाल र विवेक मुखर्जी लगायत पाँच जना साथीहरूसँग मिलेर पाँच दिनमा उक्त रोबोट तयार पारे । विराटनगर महानगरपालिकासँगकाे समन्वयमा बनाइएको उक्त रोबोटजस्तै विशेषता भएको रोबोट किन्नुपर्दा नेपालले १२ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्दथ्यो ।
रिसब भन्छन्, ‘यदि विदेशबाट हामीले यस्तो विशेषता भएको रोबोट मगाउने हो भने थोरैमा १२ लाख नेपाली रुपैयाँ खर्चनुपर्दथ्यो । तर हामीले स्थानीय सामानहरू प्रयोग गरेर स्थानीयस्तरमै रोबोट बनायौँ । यसका लागि हामीले जम्मा ८० हजार मात्र खर्चिनुपर्‍याे भने पाँच दिन समय खर्चिनुपर्‍याे ।’
छोटो समयमा नै रिसबको टोलीले ११ लाख २० हजार रुपैयाँ मात्र बचाएनन्, स्थानीयस्तरमा विद्यार्थीहरूले पनि संकटसँग लड्न राष्ट्रियस्तरका आविष्कारहरू गर्न सक्छन् भन्ने उदाहरण दिएका छन् ।
कोशी अञ्चल अस्पतालमा रोबोटको वाहवाही बटुलिसकेको रिसबको टोलीले प्रदेश १ को कोरोना संक्रमित धेरै भएको बीपी स्वास्थ्य तथा विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि थप नर्सिङ रोबोट बनाउन लागिपरिरहेकाे छ । कोशी अञ्चल अस्पतालमा रोबोटको सफलता हात परेपछि अहिले विभिन्न अस्पतालले सोही विशेषता भएका रोबोटहरूको माग गरिरहेका छन् ।
‘बीपी अस्पतालमा हामीले सहकार्य गरेर रोबोट बनाउने सम्झाैता गरिसकेका छौँ,’ रिसबले भने, ‘धेरै अस्पतालले पनि अहिले सोही किसिमका रोबोट बनाइदिनुपर्‍याे भनेर माग गरिरहेका छन् । थोरै साथीहरू छौँ, त्यसमा पनि ठूलो बजेट छैन, जसले गर्दा तीव्र रूपमा अरु रोबोट बनाउन समस्या छ ।’
रिसब सरकारबाट आर्थिक सहयोग मिल्ने हो भने सस्तोमा नै रोबोट बनाएर अस्पतालहरूलाई दिन सकिने बताउँछन् । यदि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सीको प्रयोगलाई विस्तार गर्दै नवआविष्कारहरूलाई प्राथमिकता दिँदै वातावारण बनाइदिने हाे भने नेपालमै नयाँ-नयाँ आविष्कारहरू देख्न पाइने उनी बताउँछन् ।
योसँगै कारखानाका ती युवाहरू अहिले विद्यालयस्तरमा पुगेर नयाँ आविष्कारहरूबारे विद्यार्थीहरूलाई जानकारी दिनुका साथै नयाँ आविष्कारका लागि आविष्कार केन्द्र खोल्न पनि लागिपरिरहेका छन् ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, कात्तिक ११, २०७७, ०९:३७:००